Tsvagurudzo iri nani, Mhedzisiro Mhedzisiro Martech Zone
Shandisa iri zvoga musika yekutsvagisa chikuva uye ndeimwe chete yemaoko mashoma pasi rose ayo akanyatso gadzirirwa ekugadzirisa iwo ese maitiro ekutsvagisa.
Ipuratifomu inoita kuti zvive nyore uye nekukurumidza kumakambani kuwana zvakakosha zvevatengi pamatanho ese eiyo chigadzirwa kuvandudza uye kushambadzira maitiro kuitira kuita zvirinani bhizinesi sarudzo. Kutora danho rimwe kumberi, Methodify yakagadzirirwa kuve inochinja, ichipa makambani mhinduro kune chero mhando yechigadzirwa, kushambadzira kana mubvunzo wezviitiko - kunyangwe iwo avasina kufunga nezvazvo.
Shandisa akave nepamuviri achiitisa ongororo yekudzokorora nepfungwa kubhangi hombe reCanada. Chikwata cheMethodify chakabata chinetso chekuvabatsira kuti vawedzere kutsvagurudza vatengi vachipa mhinduro yemhando yepamusoro nekukurumidza.
Bhengi rakanga rakatarisana nenyaya dzinowanzoitika kumabhizimusi nhasi — yakakosha nguva yekushandura zvigadzirwa nemishandirapamwe, zviwanikwa zvishoma zvekushanda nazvo uye kuderedzwa kukuru kwebhajeti. Ipo ivo vaida kuisa yakawanda yevatengi nzwisiso kazhinji mukuita kwavo, ivo zvakare vaiziva echinyakare pfungwa, kushambadzira uye package dhizaini kuyedza yaisanganisira yakareba, yakaoma research research iyo inogona kunonoka uye kudhura.
Ngatiisei mamiriro akapoterera pane izvi: masangano anoda mamwe sarudzo kuti atsigirwe nedata, achiisa kumanikidza kukuru kune avo vasina vashandi vekutsvagisa uye e data analytics zvikwata. Uye isu tinoziva kuisa mutoro wese wesangano pane vashoma vevashandi ndiyo nzira yenjodzi.
Izvi zvino zvinotungamira kuzvikwata zvekushambadzira zvinotora mapfupi uye kushandisa maturusi ekutsvagisa senge maficha epaFacebook kuti uwane mhinduro yevatengi. Aya maitiro e DIY anowanzo sanganisira pasainzi sarudzo, dzinokanganisa nzira dzakatsigirwa dzekutsvagisa, kushaya hanya maitiro ehuwandu uye kuwedzera njodzi yekusavimbika uye mibvunzo inotungamira.
Panzvimbo pekuyedza kudzora nzira dzekutsvagisa sainzi, Methodify inotsvaga kubatsira mabhenji kutarisisa nhanho yavo pakubata vatengi vavo mukugadzirwa kwechigadzirwa nekushambadzira.
Kugadzirisa matambudziko aya, Shandisa yakagadzirirwa kuve chikuva icho:
Inotendera vashambadzi kuyedza nekukurumidza uye kazhinji (kutora nzira yekuyedza-uye-kudzidza iyo inopa mhedzisiro - kwete kumirira kuburitswa kukuru mwedzi unotevera);
Inounza mutengi muhurukuro padanho rega rekugadzirwa kwechigadzirwa uye kushambadzira;
Inoisa kuomarara kutenderera maitiro ekutsvaga.
Maitiro Ekuita Sei Kuwana Izvo Zvinangwa Zvakakosha
Kupa kugona kuyedza kazhinji, Shandisa inovakwa yakakomberedza hunyanzvi hweagile. Pakati peMethodify inovimbisa mhedzisiro-yekutendeuka mhedzisiro pane inoshanda mutengo poindi. Maitiro ekambani anounza zvirinani ROI yevatengesi uye anonzwisisa zvikwata, achivapa iwo mhinduro inoenderera yevatengi kuburikidza nepfupi, 5-10-mineti ongororo maringe neyakajairwa 45-mineti ongororo inotora mavhiki mhedzisiro.
Kuisa kuomarara pakuferefeta, ivo nhema bhokisi nzira dzakaratidza kuti dzakanyorwa nevanoongorora vakavimbika. Nzira iyo mibvunzo inobvunzwa, marongero arimo; hapana anogona kuchinja nzira iyoyo. Izvi zvinogonesa mabhenji uye maalgorithms anoramba achienderana. Nekudaro, mucherechedzo unogona kukumbira kuvhura nekushandura nzira, kugadzira net nzira nyowani papuratifomu. Chete chiratidzo chinokwanisa kuwana iyi nzira nyowani.
A Enzanisa Nyaya Yekudzidza
Imwe yeCanada inotengesa zvakanyanya whiskey brand, JP Nyanzvi, iyo inogadzirwa neCorby Spirit neWine Limited, yakashandisa Methodify kubatsira kugadzira uye kunatsa imwe yeanonyanya kukoshesa mushandirapamwe akambotangwa muindasitiri yedoro - Hold it High, iyo yakapa vanhu mukana wekukochekedzana nenzira hombe .
Pakutanga kwekuronga mushandirapamwe, JP Wiser's akagadzira timu yaisanganisira vanobatsirana nevamiriri kubva kumakosi akasiyana uye-iyo tambo yakarukwa kuburikidza nehurongwa hwekuronga mushandirapamwe - yavo yekuyedza uye yekumisikidza chikuva, Methodify.
Pakupedzisira, iyo mhando yaida kukurudzira maCanada nyika yese kuti vaise nguva imwechete uye vatarisire muhukama hwavo sezvavanoisa mu whiskey yavo. Kuti vaite kudaro, timu yavo yesangano yakafunga zano rekugadzira mushandirapamwe wekutanga wakazara weJP Wiser's, ichipa vatengi mukana wekunyorera shamwari dzavo paruzhinji pamabhodhi, redhiyo, nemagariro enhau. Vasingazive mhando dzemastoisiti dzavaizogamuchira uye nematanho api ekunyatso kutaurirana izvi mukati, vakaita Methodify kuitisa kuyedza nekugadzirisa izvo zvaizoita kuti mushandirapamwe ubudirire. Nekushandisa Methodify kuunza izwi revatengi mune zvakawandisa mukuvandudza, mushandirapamwe wakazopedzisira yakagadzirirwa vatengi, nevatengi.
Sezvo mhedzisiro inogona kuunzwa mukati memazuva 1-2, mubatsiri wega wega wesangano akakwanisa kusanganisa mhinduro yevatengi nekukurumidza muzvirongwa zvavo. Panzvimbo pekukanganisa kukura kwekugadzira, iyo tsvagiridzo yakashanda seanokurumidza.
Kutsvaga Kwemusika Kuedzwa Kunosanganisirwa
Kuedzwa Kwenharaunda: Kwayedzwa dzakasiyana nzvimbo dzekugadzira kuti ndione kuti ndeipi nzira inonzwika zvakanyanya nemusika wekutengesa
Tactical Kuuraya Kuedzwa: Wakaongorora kuti ndeapi maitiro mukati medunhu rakakunda ainyanya kudiwa nechinangwa, mune zvese Chirungu neFrench.
Uchishandisa chikuva cheAgile senge Shandisa kuita sarudzo panguva yese yekushambadzira kwakapa iyo JP Wiser timu yekutengesa ruzivo kuti vangangodaro vasina kuyedza nevatengi neimwe nzira. Semuenzaniso, vangadai vasina kuyedza pfungwa dzenharaunda vasati vaita yekutsvagisa musika chikuva, asi izvi zvakaratidza kushoropodza sezvo vanoita sarudzo vakuru kuCorby vakakamurwa kumatunhu ekutanga akapihwa. Izvo zvakare zvakabatsira kuisa pamberi pepamhepo, pasipo nehunyanzvi matekiniki anoshandiswa mumushandirapamwe zvichienderana nemhinduro dzevatengi.
Mushandirapamwe uye mucherechedzo zvinoonekwa kukura kwakasimba semhedzisiro, asi mhedzisiro ine zvainoreva yakabva mungano dzega nekukanganisa kwaita chiratidzo muhukama hwevanhu. Kubva pane chikumbiro chebhodhi rebhodhi muToronto kuenda kune mupenyu wekuyambuka muganhu toast kune hushamwari hweAmerican neCanada, inosanganisira vanhu makumi mashanu pamativi ese ari maviri emuganhu muDetroit, Michigan neWindsor, Ontario, imba yeJP Wiser's distillery.
Kune nzvimbo ina uko Methodify inomira kure nevakwikwidzi:
Iko kune kudikanwa kuri pachena kwepamhepo kutsvagisa chikuva icho chinopa iwo iwo iwo iwo mwero wekusimba seyakajairika data kuunganidzwa uku uchipawo iri nyore kushandisa interface senge mazhinji eanhasi e DIY mhinduro.
Kugona kugadzirisa chikuva chemakambani;
Semumwe wevatanga kupinda mumusika wekushandisa, Methodify iri kumisikidza zviyero uye nekuvandudza iro ramangwana rekutsvagisa musika zvoga;
Makore makumi maviri emakore emhuri ari muindasitiri pakati pekambani yeMethodify inobata, Delvinia, uye AskingCanadians, iro repamhepo rekuunganidza data panhare;
Kuzvipira kutsvagisa nekusimudzira kuenderera nekuvandudza kuburikidza nekambani yemubereki, Delvinia.
Wakagadzirira kudzidza zvakawanda?
Saina kumusoro kune iyo Methodify Demo
Tags: rwezvemabhengibmofintechfintech kutsvagisajd akachenjeramusika yekutsvaga chikuvakurongedzatsvakurudzoresearchtech